DIB U CALEEMAHA BRONCHOPNEUMONIA: SABAB, CALAAMADO, DAAWEYN, DAROOGO - XOOLAHA
Digaaga Bronchopneumonia: calaamadaha iyo daaweynta
"Kubka caloosha ayaa laba rigood oo nuugaya" - hubsashada erayadani shaki kuma jiro inta uu kubka uusan ku dhicin bronchopneumonia. Inta lagu jiro muddada cudurkan iyo xitaa ka dib markii uu marayo, Dibiga ah ma aha oo kaliya laba, laakiin sidoo kale ku dhuftaan ilmo galeenka. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan kuwo dilaa, cudurkani, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku jiraa kaalinta labaad ee soo noqnoqoshada soo noqnoqoshada ka dib marka dhibaatooyinka caloosha ku jira ee lo'dda dhalinyarada ah ay sababaan waxyeelo weyn u geysata xoolaha. Sidee loola tacaali doonaa, waxaana lagala hadlayaa hoos.
Cudurka Bronchopneumonia, oo ka duwan midka aan la taaban Karin, taas oo ah, ka soo baxaysa hab aan habooneyn, iyo natiijada, tusaale ahaan, hypothermia ee jirka, waxaa lagu gartaa geedi socodka bararsan ee saameynaya borotiinka iyo alveoli. Dabadeed geedi socodka xanuunka badanaa si dhakhso ah ayuu ugu faafaa xubnaha kale ee neefta.
Maqnaanshaha qayb ka mid ah cudurrada faafa ee cudurada dhalinyarada yar ee qaba buro-boobka, wax-qabad kale oo ka mid ah sababaha kale ayaa soo baxa kuwaas oo horseedi kara cudurkan:
Xayawaanada waxay ku yaalaan meel u dhow degaan aad u badan.
Hawada ku hareereysan xayawaanka oo ay ugu wacan tahay hawo-mareenka liidata waxaa lagu nadiifiyaa ammonia iyo hydrogen sulfide.
Heerkulka hoose, qoyaan badan iyo qashin lahayn, oo keena hargab.
Ka go'idda xubnaha neefsashada sababo dhaqdhaqaaq la'aan.
Xaaladaha walaaca badan.
Cuntada tayada liita.
Vitamin A iyo D yaraanta
Kala soocidda nidaamka kululaynta ee weylaha ah ee u kululey kulaylka muddo dheer.
Cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirka, kuwaas oo aan la daaweyn muddo dheer.
Ma taqaanaa? Haddii caanaha quudinta daaqada ku nool beerta ama beerwadeenka beeruhu uu socdo ilaa saddex bilood, oo ay weheliyaan waxyaabo kala duwan oo ku jirta quudinta da'da hore, ka dibna xaaladaha dabiiciga ah weylaha waxaa lagu quudiyay caano saddex sano ah.
Foomamka iyo calaamadaha
Cudurkani waa mid aan caddaalad ahayn, oo muujinaya astaamo kala duwan iyo wadaagista darnaanta qaababka kala duwan ee foomka:
Foomkan waxaa lagu gartaa koritaanka degdegga ah ee cudurka illaa 12 maalmood waxaana lagu gartaa:
luminta xayawaanka xayawaanka iyo dabeecadda dabeecadda;
heerkulka kor u kaca ilaa +42 ° S illaa 2-3 maalmood oo xanuun ah;
muuqaalka neefsiga gaaban;
dhacdo qufac qallalan oo adag;
bararka naasaha sanka;
dheecaan ka soo baxa sanka xabka oo ku jira xubno taran;
Leukocytosis laga helo dhiigga inta lagu jiro falanqaynta.
Qaabkan cudurka bronchopneumonia, cudurku wuxuu leeyahay mudo dheer, wakhtiga la gaarsiiyo bakeeriga ama xitaa bil gudaheeda oo lagu garto:
xaaladda niyadjabsan ee xayawaanka, lumitaanka cunto xumo iyo daciifnimo guud;
heerkulka caadiga ah ee maalintii iyo ficil yar oo fiidkii ah;
qufac badan oo qoyan;
Cudurka maskaxda ee uurka leh ee ay keento suntan;
neefsashad adag oo neefsashada ah markaad dhageysato.
Markaad kordhiso weylaha, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa cudurrada sida shubanka iyo colibacillosis, iyo sidoo kale cudurrada xubnaha.
Haddii xaalad degdeg ah ama aan sax ahayn ee noocyada hore ee cudurkan, kubbada ayaa laga yaabaa in uu yeesho qaab daba-dheeraada ee bronchopneumonia, oo calaamadaha soo socda lagu arkay:
qufac joogto ah;
dheecaan sanka ka yimaada xayawaan dilaac ah;
korodh miisaanka gaabis;
caadeysiga xilliga caadifada;
dhageysiga sambabada oo qalalan oo qalalan.
Marka la ogaado cudurka ka dib baaritaan dibadda ah oo xayawaan ah iyo barashada shuruudaha, dhakhaatiirta xooluhu waxay dhageystaan ​​dhawaaqyada wadnaha iyo hawlaha neefsiga. Waxaa intaa dheer, baaritaanka dhiigga iyo baarista fluoroscopy ayaa la sameeyaa.
Hawlaha ugu muhiimsan waa in la tirtiro nooca caabuqa ee cudurka.
Ma taqaanaa? Celcelis ahaan, lo'da waxay ku nool yihiin labaatan sano, halka da'da dibi ay shan sano ka yar tahay.
Maadaama ay jiraan cuduro badan oo isku mid ah calaamadaha cudurka bronchopneumonia, takhasusku waa inuu ka taliyaa cudurka:
dib-u-eegista cudurka dibloomaasiga;
Bronchopneumonia, oo saameeyn ku leh nidaamka neefsiga ee habka neefsiga, ka dibna ku faafo xubnaha kale ee xayawaanka, taas oo keeneysa isbeddelkooda:
Nidaamka neefsashadu wuxuu ka shaqeeyaa shaqaalaheeda si ka sii xun uguna sii daran, taasoo u oggolaanaysa boodh, ammonia iyo biyaha uumiga ku dhaca sanbabada, taas oo horseedaysa jiritaanka nidaamka neefsiga;
carqaladeynaya waxqabadka unugyada nidaamka dareenka;
Xasaasiyadda ayaa hoos u dhacda;
Heerarka daaweynta histamine iyo lysozyme waxay ku dhacaan jirka;
waxaa jira xannibaad dhiig ah oo ku dhaca sanbabada;
yareeyaa codka xididdada dhiigga;
waxaa jira hoos u dhaca cadaadiska dhiigga;
Dystrophy-da ayaa saameynaya muruqyada wadnaha iyo beerka;
korodhka diirada ee hydrochloric acid ayaa ku dhaca caloosha;
Kelyuhu waxay yareeyaan shaqadooda sifeeynta.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad barato sida loo doorto kubka saxda ah, sida loo quudiyo, iyo sidoo kale sababta weyshu u jilicsan tahay oo aan fiicnayn.
Hababka daaweynta ee bronchopneumonia ee weylaha
Inkasta oo cudurkani uu si qotodheer ah u barto khabiiro takhasus leh, haddana ma jiro daaweyn caalami ah oo keliya ee la dagaalanka. Iyadoo ku xiran darnaanta cudurrada, qaababka kala duwan ee dhacdooyinka, qaababka daaweynta qaarkood ayaa la doortaa.
Inkastoo xaqiiqda ah in cudurka bronchopneumonia uusan ahayn mid faafa dabiiciga ah, xayawaan jirran ayaa wali laga goosanayaa inta hartay. Xerada, xayawaanka jiran waa inuu noqdaa mid nadiif ah oo qallalan, qashin jilicsan waa in la dhigo dabaqa, iyo xaddiga fiitamiinada iyo macdanta macdanta waa in ay ahaataa ugu yaraan laba jeer oo sarreeya.
Maaddaama habka neefsashadu uu cudurku ku dhaco, xilliga kuleylaha, kubka jirran ayaa ugu wanaagsan in hawada cusub lagu hayo hoosteeda.
Inkasta oo cudurka bronchopneumonia uusan ahayn mid faafa dabiiciga ah, haddana cudurku wuxuu keenaa ka qaybqaadashada firfircoonaanta jirka.
Daawooyinka antibiyootikada ee wanaagsan, kuwaas oo caadiyan iyo si guul leh loo isticmaalay sanado badan oo hargab, ayaa hadda si muuqata hoos ugu dhigtay waxtarkooda, maaddaama maadadaas ay soo aruuriyeen iska caabin badan oo iyaga ka mid ah.
Waa muhiim! Daaweynta kalluunka bronchopneumonia waa in kaliya lagu dhaqmo by dhakhaatiirta. Waxqabadka isdabajoogga ee arrintani waa mid leh waxyaabo aan loo baahnayn.
Xaaladahan oo kale, way adagtahay in la cuno xayawaanka xoolaha ee naftiisa ku daaweynaya duufanka daawooyinka dhaqameed, si loo kormeero guusha daaweynta, halkaanna waxaa jira halis ah in cudurku ku soo rogi doono qaab ama xitaa daba joog ah.
Nuxurka habkan daaweyntu waa inuu si toos ah u xoojiyo daawooyinka daroogada si deg deg ah loogu xalliyo geeddi-socodka nabarrada.
Daaweyntani waxa uu si wax ku ool ah ugu jiraa qaababka ba'an iyo subakut ee cudurka, laakiin waxa ay ku guuldareysatey in ay sii socoto muddada dheer ee cudurka. Daaweyntu waxay ku saleysan tahay isticmaalka kooxda cephalosporin iyo kooxaha macloid ee daroogada. Intaa waxaa dheer, xayawaanka ayaa sidoo kale lagu bogsadaa sulfonamides, Tetracycline iyo Levomycetin.
Dawada daloolinta ee 7-12 ml Streptomycin halkii kiilo ee miisaanka xoolaha ayaa si fiican u cadeeyay: 5 g oo daroogada ah ayaa lagu qasi karaa 200 ml 9% salineinka, iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey waxaa la isku duraa saddex maalmood maalintii.
Habkan daaweynta, daawooyinka waxaa si toos ah loogu duraa trachea xayawaanka iyadoo loo marayo baaritaan ama irbad. Si arrintan loo sameeyo, inta badan waxay isticmaalaan "Isoniazid" ama antibiyootiko oo ka timaada kooxda tetracycline ee 5 kun oo mitir kiiloogaraamida kubka miisaanka.
Nuxurta daaweyntaan waxay ka koobantahay walxaha firfircoon ee qolka leh weylaha. Xaaladdan, daawooyinka antimicrobial waxaa loo isticmaalaa qaabka:
xalka biyaha-gliserin leh Iodine additive;
Xayawaanka xayawaanka ah ayaa sidoo kale la neefsado iyadoo:
Dhakhaatiirta khibrada leh waxay u adeegsadaan habab dhowr ah daaweynta ugu waxtarka badan, iyagoo horumarinaya nidaamyadoodii kala duwan ee lagula tacaalayo bronchopneumonia. Mid ka mid ah mashaariicda ugu waxtarka badan waxay u egtahay sidan:
Ka dib tallaal joogta ah oo ay ka mid yihiin weylaha, toddobaadle iyo, haddii ay jiraan xayawaan jireed ee lo'dda, daaweynta maalin kasta ee dhismaha leh aerosol macnaheedu waa la fuliyaa.
Duuf xanuunsan waxaa la siiyaa irbad xidid dhiig oo cusub oo laga qaato godadka jugular ee xayawaan caafimaad leh. Si aad u dejiso dhiigga wuxuu isticmaalay boqolkiiba toban kalsiyam klorit ama sodium citrate oo isku mid ah.
Mudada oo dhan daaweynta ee weylaha siinayaa daawooyinka lidka bakteeriyada. Ugu horeysay ayaa lagu dabaqay si fiican loo xaqiijiyay ee daaweynta cudurada neefsashada ee dhalinyarada "Egotin" at heerka of 1.5 g oo ah badeecada 10 kg oo ah miisaanka kubka. Daawada waxaa lagu kala diraa biyo ama caanaha, iyo sidoo kale isku dhafan.
Si looga hortago bilawga cudurkan, khubarada waxay ku talinayaan:
Abuur shuruudaha ugu wanaagsan ee dayactirka iyo quudinta buuxda ee lo'da uurka leh iyo kubir cusub oo dhasha.
Bixi cunnida cawska ah ee caanaha iyo caanaha si adag u cufan cuntada diirka.
Inta badan ee suurtogalka ah si aad u duubtid xabadka xayawaanka yar yar.
Si tartiib ah u ilaali nadiifinta guriga dushiisa oo ka fogow qoyaan badan.
Si joogto ah u neefso qashinka.
Xilliga diirimaadka si ay u ilaaliyaan weylaha hawada furan ee hoosta ka soo horjeeda, iyadoo la isticmaalayo dabaqa dhulka.
Ha ku daboolin xayawaanka si aan walwal lahayn.
Waqti gaaban u aqoonsanayaan weylaha jiran.
Inkasta oo aqoonta loo ururiyay ee qaababka horumarinta cudurka, astaamaha muuqaalkiisa iyo qaababka daaweynta, khabiiradu weli wali si buuxda uma fahmin macmiilaha cudurka bronchopneumonia ee lo'da yar.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la iska ilaaliyo in dad badan oo ku nool deegaannada weylaha.
Si kastaba ha ahaatee, kalluumeyaal ayaa maanta haysta talaabooyin lagu xakameyn karo cudurkan ayna ka hortagaan dhacdooyinkooda.